Ikhaya laseNorthwoods echibini leClam - I-Airbnb
Ikhaya laseNorthwoods echibini leClam
Siren, Wisconsin, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Barb
Ikhabethe lokungena elisenyakatho enyakatho yokulala ama-4, amabhavu ama-2. Siyakujabulela ukupheka, ikhishi lifakwe konke ongase udinge ukupheka. Kukhona nesiqandisi esengeziwe. Kunegumbi elikhulu likavulandi lalezo zinsuku zemvula lemidlalo. Ichibi elikhulu lokudoba futhi kukhona ukwethulwa kwezikebhe ezi-3. Uma udinga sinesikebhe esizoqashwa ngemali eyengeziwe . Kunendawo yokucima umlilo nezinkuni eziningi . Izindlela eziningi ze-ATV ne-snowmobile. Leli yikhaya elisechibini ukuze wonke umuntu alijabulele. Sizikhipha izinja ngenkokhelo
ubusika buhle kakhulu ngokudoba eqhweni kanye nekwindla yeqhwa futhi intwasahlobo yinhle ngemibala nemvelo, futhi ihlobo yilapho yonke into emnandi elangeni, ukudoba ngezikebhe uhlezi emanzini noma emlilweni kuhlale kumnandi.
unendlu yokujabulela umndeni nabangane
omakhelwane uma bephezulu, bahle kakhulu futhi bahlale bezimisele ukusiza uma kudingeka
My husband and I were raised in Minnesota and moved to Texas in 2005 we have 3 children all grown, and 4 grand children ranging in age from 0-12. we enjoy traveling so we have a few homes in texas and Wisconsin that we rent when we are not there so hope you enjoy
My husband and I were raised in Minnesota and moved to Texas in 2005 we have 3 children all grown, and 4 grand children ranging in age from 0-12. we enjoy traveling so we have a fe…
sihlala phansi nje emgwaqeni isikhathi esiningi uma kudingeka